Dowladda oo sheegtay in la burburiyay goob ay qaraxyo ku diyaarinayeen Al-Shabaab - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda oo sheegtay in la burburiyay goob ay qaraxyo ku diyaarinayeen Al-Shabaab
Dowladda oo sheegtay in la burburiyay goob ay qaraxyo ku diyaarinayeen Al-Shabaab
Ciidanka Xoogga Dalka somaliyeed ayaa hawlgalki qorsheysan waxaa ay ka sameeyeen degaanka mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellaha Hoose , halkaas oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda ayaa waxaa ay sheegeen in ujeedka howlgalka uu ahaa inay degaan kaas ka saaraan Al-Shabaab, isla markaana ay burburiyeen Xarumo ay lahaayeen Al-Shabaab.
Sidoo kale Saraakiisha waxaa ay sheegeen in howlgalka ay sidoo kale ku burburiyeen Goobo ay Al-Shabaab ku diyarinayeen waxyaabaha qarxa , sidoo kalena ay u yaleen dawooyin.
Dhinaca kale War kasoo baxay Taliska Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada dowladda y ku guuleysteen inay soo qabtaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab, oo uu kujiray Sarkaal Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca Maaliyadda degaanka Mubaarak.
Previous articleSomaliland oo u jawaabtay Maamulka Puntland
Next articleCiidanka booliska oo war kasoo saaray Carruur lagu gowracay Baydhabo